तान्त्रिक विधिबाट भुङ्ग्रामाथि यस्तो नाच! « Dainik Online
तान्त्रिक विधिबाट भुङ्ग्रामाथि यस्तो नाच!
प्रकाशित मिति : ५ बैशाख २०७९, सोमबार १ : ३७
काठमाडौंl साँझ ढल्किँदै गयो । मानिसहरूको चहलपहल बढ्दै गयो । आँगनमा बाजा बज्दै थियो । बाजाको आवाज सुनेर रातको पर्वाह नगरी वारिदेखि पारि गाउँसम्मका महिला, पुरुष, बालबालिकाको भिड बढ्दै थियो । काखमा सन्तान च्यापेर आउने आमाहरूको उपस्थिति पनि बाक्लै थियो ।
दुई घन्टाभन्दा बढी समय बलेको दाउरा सबै आगाका भुङ्ग्रामा परिणत भयो । त्यसपछि सेतो, पहेँलो, रातो वस्त्रधारी पुरुषहरूले तान्त्रिक विधिबाट आगाका भुङ्ग्रामा गाईको घिउ मोलिएको जौ र तीलको चरु हालेर पूजा गरी मूल घरतर्फ लागे । मध्यराति करिब ११ बजे गिरीबस्तीसँगै वरिपरिबाट भेला भएका मानिस बारीको डिलमा बसेर निकै कौतुहलताका साथ ‘अग्निकुण्ड’ तर्फ हेर्दै अब के हुन्छ, आगोमाथि मान्छे कसरी नाच्छन् भनी हेर्दै थिए ।
त्यसो त यहाँको गिरी कुलमा अकालमा ज्यान गुमाएकाहरूको आत्मा मुक्तिको कर्मका लागि खली खुवाउन धेरै वर्षदेखि छलफल हुँदै आए पनि यस वर्ष पूर्णता पाएको हो । गत माघ पूर्णिमाको दिनमा कुलका सबै दाजुभाइ छलफल गरी वायुृ उतार्ने काम सुरु भएको थियो । हरेक दिन राति खाना खाएपछि कुलका सबै पुरुष शुद्ध भई जम्मा भएर प्रत्येक रात गुरुमार्फत वायु उतार्ने काम सम्पन्न गरेपछि खली खुवाएर त्यसलाई पूर्णता दिइएको ६० वर्षीय सानुभाइ गिरीले बताए ।
आफ्नो कुलमा अकालमा ज्यान गुमाएर मोक्ष नपाएका पितृको उद्धारका लागि गरिने प्राचीन र तान्त्रिक विधिलाई खली खाने प्रथा भन्ने गरिएको गुरु गोकुल वनले बताए । सुरुमा गुरुमार्फत कुलका सबै जम्मा भएर एक भाइका घरमा वायु उतार्ने कार्य गरिन्छ । वायु उतार्ने क्रममा मृतात्माले आफ्नै कुलभित्रको आफूले चाहेको व्यक्तिको शरीरमा प्रवेश गर्दै आफ्नो मृत्यु कसरी भयो, आत्माले कति दुःख पायो र अब आत्माले कसरी मोक्ष पाउँछ भन्ने गर्छन् । यसमा तान्त्रिक माध्यमबाट प्रेताात्मा ‘वायु’लाई बोलाएर आफ्नो मृत्युबारे बकाएपछि मृतकको इच्छानुसार खली प्रथा गराइन्छ ।
त्यसरी भड्किएको मृतात्माले आफ्नो कुलभित्र दुःख दिने कथन रहँदै आएको र वायु उतारेर खली खुवाएपछि वायुदेवताका रुपमा स्थान दिई हरेक वर्ष दिवालीका दिन कुलदेवता र वायुदेवताको पूजा गरेपछि कुलमा राम्रो हुने विश्वास वर्षौदेखि रहँदै आएको वनले बताए । यो प्रथा हिन्दू धर्मावलम्बीमा प्राचीनकालदेखि चल्दै आएको बताउँदै उनले यसलाई धर्म, परम्परा, संस्कृति र तन्त्रसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, “आगाको भुङ्ग्रामाथि नाङ्ग्रो खुट्टाले नाचेर खरानी बनाउने घटना आफ्नै आँखा अगाडि देख्न सकिन्छ, यसलाई तान्त्रिक विधि र दैवी शक्तिको अनुपम नमूनाका रूपमा लिन सकिन्छ ।” उनका अनुसार शरीरमा कुलदेवता र वायुदेवता चढेका व्यक्तिलाई डाङ्ग्रे भनिन्छ, उनीहरूलाई आगोको भुङ्ग्रामा नाचेर पूर्णता दिने कार्यलाई ‘खली खाने’ भन्ने गरिन्छ । डाङ्ग्रे हुन कठिन तान्त्रिक परीक्षा पूरा गर्नुपर्ने बताउँदै गुरु साजन थापाले भने, “खली खानु डाङ्ग्रे हुने प्रक्रियाको अन्तिम परीक्षा हो, त्यसपछि उनीहरूकै शरीरमा कुल र वायु देवता रहिरहन्छ, त्यसैले धेरै परीक्षणबाट सफल हुँदै खली खुवाउने बेलासम्म आइन्छ, खली खुवाउन बालिने आगो पनि तान्त्रिक विधिबाट जगाइने भएकाले डाङ्ग्रेहरू आगामा नाच्दा पोल्दैन, नत उनीहरूको खुट्टामा फोका उठ्दैन, घाउ लाग्दैन ।” आफूहरूका शरीरमा धेरै कम्पन हुने र उफ्रने भएकाले भोलिपल्ट भने शरीर निकै थाक्ने गरेको उनीहरू बताउँछन् ।
खली खाने डाङ्ग्रे लामो प्रक्रियाबाट छनोट हुन्छन् । ‘जोसुकै व्यक्ति पनि डाङ्ग्रे हुन पाउँदैनन् । वायु उतार्ने क्रममा गुले धामी बसेर तन्त्रमन्त्रले पूजा गर्दा जसका शरीरमा कुलदेवता र वायु चढ्छ, उनीहरू मात्र डाङ्ग्रे भएर खली खानयोग्य हुने सानुभाइले बताए ।
तान्त्रिक विधिद्वारा धामीले विशेष पूजा गरेपछि कुलका मानिसका जिउमा कुलदेवता चढ्ने उनको भनाइ छ । कुलदेवता शरीरमा आएपछि पटकपटक विभिन्न विधिबाट हुने परीक्षण सफल भएपछि अन्तिममा मात्रै खली खुवाएर डाङ्ग्रेलाई पूर्णता दिइने धुपौरे दिनेश गिरीले बताए । डाङ्ग्रे भएपछि शुद्ध भएर बस्नुपर्ने र अशुद्ध खानपान तथा व्यवहार गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
दिनेशका कक्षा ९ मा अध्ययनरत १४ वर्षीय छोरा निश्चलका शरीरमा विन्ध्यवासिनी प्रवेश गरेर आगामा नाच्दा देख्नेहरू अचम्ममा मात्रै परेनन्, स्वयं उनीसमेत आगामा पसेर उफ्रँदा, नाच्दा, पैताला र शरीरका कुनै पनि भागमा पोलाइको अनुभूति नभएको, खुट्टामा कुनै समस्या नभएको बताए ।
कठिन परीक्षा उत्तीर्ण गरिएको अनुभव सुनाउँदै रोजिनले आफ्ना शरीरमा आगाले पोल्ने, फोका उठ्ने, घाउ हुने केही नभएको तर भोलिपल्ट शरीर थाकेको बताए । आफ्नो कूल परिवार भित्रबाट सङ्कलित रु ६ लाख खर्च गरेर खली पूजा सम्पन्न गरिए पनि अन्यत्र अवस्था हेरेर रु १६ लाखसम्म खर्च हुने गरेको पाइएको सुरेश बताउँछन् । खली खुवाएपछि कुलदेवता र वायुदेवताको शिला स्थापना गर्ने, पूजा गरेर देवता थन्क्याउने र सामूहिहक रूपमा कूलका परिवारले भोज खाएपछि भने बाजागाजाका साथ विभिन्न उपहार एवं दक्षिणा दिएर गुरुहरूलाई बिदाइ गर्ने परम्परा छ ।